Imigomo Yesevisi ye-Google – Ubumfihlo kanye Nemigomo – I-Google
Ubudlelwane bakho ne-Google
Ukusebenzisa amasevisi ye-Google
Okuqukethwe kumasevisi e-Google
Isofthiwe kumasevisi e-Google
Esimweni sezinkinga noma ukungavumelani
Mayelana nale mibandela
Imigomo Yesevisi ye-Google
U-Mashi 31, 2020 osebenzayo | Izinguqulo ezifakwe kwingobo yomlando | Landa i-PDF
Yini efakiwe kule migomo
Siyazi ukuthi kuyalinga ukweqa le Migomo Yesevisi, kodwa kubalulekile ukusungula ukuthi ungalindela ini kusukela kithi njengoba usebenzisa amasevisi e-Google, nokuthi yini esingayilindela kuwe.
Le migomo yesevisi ibonisa indlela amabhizinisi e-Google asebenza ngayo, imithetho esebenza enkampanini yethu, kanye nezinye izinto esikholwa ukukthi zingaba liqiniso. Ngalokho ke, le migomo yesevisi isiza ukuchaza ubudlelwano be-Google nawe njengoba usebenzisana namasevisi ethu. Isibonelo, le migomo ibandakanya izihloko ezilandelayo:
Yini ongayilindela kithi, echaza ukuthi sinikeza kanjani siphinde sithuthukise amasevisi ethu
Esikulindele kuwe, okuqalisa imithetho ethile yokusebenzisa amasevisi ethu
Okuqukethwe kumasevisi e-Google, okuchaza amalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula kokuqukethwe okutholayo kumasevisi ethu — noma ngabe lokho okuqukethwe okwakho, okwe-Google, noma abanye
Ezimweni zezinkinga noma ukungavumelani, okuchaza amanye amalungelo omthetho onawo, nokuthi ulindeleni uma umuntu othile ephula le migomo
Ukuqonda le migomo kubalulekile ngoba, ngokusebenzisa amasevisi ethu, uvumelana nale migomo.
Ngaphandle kwale migomo, siphinde sishicilele Inqubomgomo Yobumfihlo. Noma kungasiyo ingxenye yale migomo, sikukhuthaza ukuthi uyifunde ukuze uqonde kangcono ukuthi ungabuyekeza kanjani, uphathe, uthumele, uphinde ususe ulwazi lwakho.
Google Amasevisi e-Google anikezelwa, futhi ushayisana ne:
kuhlelwe ngaphansi kwemithetho yasesifundeni sase-Delaware, USA, futhi e sebenza ngaphansi kwemithetho yase-USA
Izidingo zeminyaka yobudala
Uma ungaphansi kobudala obudingekayo ukuphatha i-akhawunti yakho ye-Google, kufanele uthole imvume yomzali wakho noma umnakekeli osemthethwni ukusebenzisa i-akhawunti ye-Google. Sicela ukuthi umzali wakho noma umnakekeli osemthethweni afunde le migomo nawe.
Uma ungumzali noma umnakekeli osemthethweni, futhi uvumela ingane yakho ukusebenzisa amasevisi, lapho ke le migomo iyasebenza kuwe futhi ubophezelekile kumsebenzi wengane yakho kumasevisi.
Amanye amasevisi e-Google anezimfuneko ezingeziwe zobudala njengoba kuchazwe kumigomo nezinqubomgomo ezingeziwe zesevisi ethile.
Le migomo isiza ukuchaza ubudlelwane phakathi kwakho ne-Google. Ukukhuluma ngobubanzi, sikunika imvume yokusebenzisa amasevisi ethu uma uvuma ukulandela le migomo, ebonisa indlela ibhizinisi le-Google lesebenza ngayo nokuthi sizuza kanjani imali. Uma sikhuluma nge-“Google,” “thina,” “thina,” kanye “nokwethu,” siqonde i-Google LLC kanye namanxusa ayo.
Yini ongayilindela kusukela kithi
Nikezela ngebanga elibanzi lamasevisi alusizo
Sinikeza amasevisi abanzi angaphansi kwale migomo, afaka:
izinhlelo zokusebenza namasayithi (afana nosesho kanye ne-Amamephu)
izinkundla (ezifana ne-Google Play)
amasevisi ahlanganisiwe (amasevisi ahlanganisiwe (afana ne-Amamephu ashumekwe kuzinhlelo zokusebenza zezinye izinkampani noma amasayithi)
Amasevisi ethu adizayinelwe ukusebenzisana, okwenza kubelula kuwe ukusuka komunye umsebenzi uye kolandelayo. Isibonelo, amamephu angakukhumbuza ukuthi uhambe ngesikhathi esibekiwe esibonakala ku-Google Khalenda.
Thuthukisa amasevisi e-Google
Sithuthukisa njalo ubuchwepheshe obusha kanye nezici ukuthuthukisa amasevisi ethu. Ngokwesibonelo, ibeka kubuhlakani bokuzifakela obusebenzisa ukufunda komshini ukuthola nokuvimbela ugaxekile nohlelo olungayilungele ikhompyutha, nokunkezela ngezici zokushintsha, ezifana nokuhumusha kanye. Njengengxenye yokuthuthukisa okuqhubekayo, kwezinye izikhathi singeza noma sisusa izici nemibenzi, sikhulise noma sehlise imikhawulo kumasevisi ethu, nokuqalisa ukunikela ngamasevisi amasha noma ukumisa amadala.
Uma senza izinguquko zomsebenzi ezithinta kabi ukusebenzisa kwakho amasevisi ethu noma uma siyeka ukunikezela ngesevisi, sizokunikezela ngesaziso esithuthukile kanye nethuba lokukhipha okuqukethwe kwakho kusuka ku-akhawunti yakho ye-Google usebenzisa i-Google Takeout, ngaphandle kwasezimweni eziphuthumayo njengokuvikela ukuhlukumeza, ukuphendula kuzimfuneko zomthetho, noma ukwazisa izinkinga zokuphepha nokusebenza.
Yini esiyilindele kuwe
Landela le migomo nemigomo engeziwe eqondiswe kusevisi
Imvume esikunika yona yokusebenzisa amasevisi ethu iyaqhubeka uma nje uhlangabezana nezibophezelo zakho kokuthi:
umgomo ongeziwe wesevisi ethile, okungenzeka, isibonelo, ukubandakanya izinto ezifana nezimfuneko zobudala ezingeziwe
Futhi senza izinqubomgomo ezahlukahlukene, sisize izikhungo, neminye imithombo etholakalayo kuwe ukuphendula imibuzo evamile nokusetha okulindelekile usebenzisa amasevisi ethu. Izisetshenziswa zibandakanya Inqubomgomo Yobumfihlo, Copyright Isikhungo Sosizo, Isikhungo Sokuphepha, namanye amakhasi afinyelelekayo kusuka kusayithi lezinqubomgomo zethu.
Noma sikunikeza imvume yokusebenzisa amasevisi ethu, sigcina noma imaphi amalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula esinawo kumasevisi.
Iningi lamasevisi ethu akuvumela ukuthi uhlanganyele nabanye. Sifuna ukugcina imvelo ehlonipha wonke umuntu, okusho ukuthi kumele ulandele lezi zimiso eziyisisekelo zokuziphatha:
thobelana nale mithetho esebenzayo, efaka ulawulo lokuthunyelwa, ukunswinywa, kanye nemithetho yokushushumbiswa kwabantu ngokungemthetho
hlonipha amalungelo abanye afaka ubumfihlo namalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula
ungahlukumezi noma ulimaze abanye (noma ukhuthaze ukuhlukunyezwa okunjalo noma ukulinyazwa) — isibonelo, ngokulahlekisa, ukuqola, ukwehlisa isithunzi, ubuxhwanguxhwangu, ukuhlukumeza, noma ukulandela abanye
ungahlukumezi, ulimaze, ungene ngokungafanele, noma uphazamise amasevisi
Imigomo nezinqubomgomo zethu ezingeziwe ezibhekane namasevisi ethile inikezela ngemininingwane engeziwe mayelana nokwenza kwakho okuqondile. Uma uthola ukuthi abanye abayilandeli le mithetho, amasevisi ethu amaningi akuvumela ukuthi ubike ukuhlukumeza. Uma sithatha isinyathelo kumbiko wokuhlukumeza, futhi sinikezela ngenqubo efanele echazwe esigabeni Ukuthatha isinyathelo esimweni sezinkinga.
Imvume yokusebenzisa okuqukethwe kwakho
Amanye amasevisi ethu adizayinelwe ukukuvumela ukuthi ulayishe, uhambise, ugcine, uthumele, wamukele, noma wabelane ngokuqukethwe kwakho. Awunaso isivumelwano esibhalwe phansi sokunikeza noma ikuphi okuqukethwe kumasevisi ethu futhi ukhululekile ukuthi ukhethe okuqukethwe ofuna ukukunikezela. Uma ukhetha ukulayisha noma ukwabelana ngokuqukethwe, sicela wenze isiqinisekiso sokuthi unamalungelo adingekayo okwenza njalo nokuthi okuqukethwe kusemthethweni.
Okuqukethwe kwakho kuhlala kungokwakho, okusho ukuthi ugcina noma imaphi amalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula onawo kokuqukethwe kwakho. Isibonelo, unawo amalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula kokuqukethwe kokudala okwenzayo, njengokubuyekeza okubhalayo. Noma ungaba nelungelo lokwabelana kokuqukethwe kokudala komunye uma bakunike imvume yabo.
Sidinga imvume yakho uma amalungelo akho okuvikela ubunikazi bokusungula akhawulela ukusetshenziswa kwethu kokuqukethwe kwakho. Unikeza i-Google leyo mvume ngale layisense.
Ilayisense lifakha okuqukthwe kwakho uma lokho okuqukethwe kuvikelwe amalungelo wendawo yobuhlakani.
Leli layisensi alithinti amalungelo akho obumfihlo — imayelana namalungelo akho empahla kuphela
Leli layisense alifake lezi zinhlobo zokuqukethwe:
ulwazi olutholakala esidlangalaleni olunikezayo, njengezilungiso ekhelini lebhizinisi lendawo. Lolo lwazi alidingi ilayisense ngoba linakwa njengolwazi oluvamile wonke omuntu okufanele alisebenzise.
impendulo oyinikezelayo, njengeziphakamiso ukuthuthukisa amasevisi ethu. Impendulo ifakwe esigabeni ukuxhumana okuphathelene nesevisi ngezansi.
lingu mhlaba jikelele, okusho ukuthi ivumeleke noma yokuphi emhlabeni
ukungskhiphi, okudho ukuyhi unganika okuqukethwe kwakho
engenazindleko, okusho ukuthi azikho izindleko zaleli layisense
Leli layisense livumela i-Google uku:
singatha, khiqiza, sabalalisa, xhumana, uphinde usebenzise okuqukethwe kwakho — isibonelo, ukuze ulondoloze okuqukethwe kwakho kumasistimu ethu uphinde ukwenze kutholakale kusukela yonke indawo lapho uya khona
shicilela, yenza ngokusobala, noma bonisa ngokusobala okuqukethwe kwakho, uma ukwenze kwabonakala kwabanye
lungisa futhi ushintshe umsebenzi wokususelwe ngokususelwe kokuqukethwe kwakho, njengokufometha kabusha noma ukuhumusha
faka ilayisense langaphansi lawa malungelo ku-:
abanye abasebenzisi bavumela amasevisi ukusebenza njengokudizayiniwe, njengokukunika amandla ukwabelana ngezithombe nabantu obakhethayo
osonkontileka bethu abasayinde izinhlelo zokusebenza nathi ezihambisana nale migomo, ngezinjongo kuphela ezikhawulelwe ezichazwe kusigaba sokuthi Injongo ngezansi
Leli layisense elenhloso ekhawulelwe:
ukusebenzisa nokuthuthukisa amasevisi, okusho ukuvumela amasevisi ukuthi asebenze njengokudizayiniwe nokudala izici ezintsha nemisebenzi. Lokhu kubandakanya ukusebenzisa amasistimu okuzenzakalelayo nama-algorithms ukuhlaziya okuqukethwe kwakho:
ngogaxekile, uhlelo olungayilungele ikhompyutha, nokuqukethwe komthetho
ukuze ubone amaphethini kudatha, afana nokunquma uma ngabe kumele kuphakanyiswe yini i-albhamu entsha kuzithombe ze-Google ukuze kugcinwe izithombe ezihambisanayo ndawonye
ukuze kwenziwe ngendlela oyifisayo amasevisi ethu kwenzelwa wena, njengokunikeza izincomo nokwenza kube ngokwakho imiphumela yosesho, okuqukethwe, nezikhangiso (ongazishintsha noma uzivale kokuthi izilungiselelo zezikhangiso)
Lokhu kuhlaziya kwenzeka njengoba okuqukethwe kuthunyelwa, kutholwa noma futhi kubekwa.
ukusebenzisa okuqukethwe okwabe esidlangalaleni ukuthuthukisa amasevisi. Isibonelo, ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza le-Google, singacaphuna ukubuyekeza okubhalile. Noma ukuthuthukisa i-Google Play, singabonisa isithombe-skrini sohlelo lokusebenza olunikezelayo ku-Google Play Store.
ukuthuthukisa ubuchwepheshe obusha namasevisi e-Google ngokuhambisana nale migomo
Leli layisense ihlala isikhathi eside inqobo nje uma okuqukethwe kwakho kuvikelwe amalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula.
Uma ususa kusuka kunoma yimaphi amasevisi ethu okuqukethwe okufakwe yilali layisense, lapho amasistimu ethu azoyeka ukwenza okuqukethwe kutholakale ngokusesidlangalalei ngenani elifanele lesikhathi. Kunokukhipha okubili:
Uma usuvele wabelane ngokuqukethwe kwakho nabanye ngaphambi kokukususa. Isibonelo, uma wabelane ngesithombe nomngani obese wenza ikhophi yaso, noma wabelana ngaso futhi, bese leso sithombe singaqhubeka sivele ku-akhawunti ye-Google yomngani wakho nanoma ususisusile kusukela ku-akhawunti yakho ye-Google.
Uma wenza okuqukethwe kwakho kutholakala ngamasevisi ezinkampani, kungenzeka ukuthi izinjini zokusesha, kufaka phakathi usesho lwe-Google, kuzoqhubeka nokuthola nokubonisa okuqukethwe kwakho njengxenye yemiphumela yosesho.
I-akhawunti yakho yakwa-Google
Uma uhlangabezana nalezi zimfuneko zobudala ungakwazi ukudala i-akhawunti ye-Google ngokufaneleka kwakho. Amanye amasevisi adinga ukuthi ube ne-akhawunti ye-Google ukuze asebenze — isibonelo, ukusebenzisa i-Gmail, udinga i-akhawunti ye-Google ukuze ube nendawo lapho ozothumela futhi wamukele i-imeyili yakho.
Ubophezelekile kokwenzayo nge-akhawunti yakho ye-Google, kufaka phakathi ukuthatha izinyathelo ezibonakalayo ukugcina i-akhawunti yakho ye-Google iphephile, futhi sikukhuthaza ukuthi usebenzise njalo Ukuhlola kokuvikela.
Usebenzisa amasevisi e-Google wenzela inhlangano
Iningi lezinhlangano, ezifana namabhizinisi, izinhlangano ezingenzi-nzuzo, nezikole, zisebenzisa amasevisi ethu. Ukuze usebenzise amasevisi ethu wenzela inhlangano:
oqokelwe ukumela ngokusemthethweni kuleyo nhlangano kumele avumelane nale migomo
umlawuli wenhlangano yakho anganikeza i-akhawunti ye-Google kuwe. Loyo mlawuli angadinga ukuthi ulandele izimiso ezingeziwe futhi angakwazi ukufinyelela noma akhubaze i-akhawunti yakho ye-Google.
Ukuxhumana okuhambisana nesevisi
Ukuze sikunikeze ngamasevisi ethu, kwesinye isikhathi sikuthumelela izaziso zesevisi nolunye ulwazi. Ukuze ufunde kabanzi ngendlela esixhumana nayo nawe, bona Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Google.
Uma ukhetha ukusinikeza impendulo, efana neziphakamiso zokuthuthukisa amasevisi ethu, singaphendula kumpendulo yakho ngaphandle kwesivumelwano esibhalwe phansi esiya kuwe.
Amanye amasevisi ethu akunika ithuba lokwenza okuqukethwe kwakho kutholakale esidlangalaleni — isibonelo, ungathumela umkhiqizo noma ukubuyekeza kwendawo yokudlalela oyibhalile, noma ungalayisha okubhalwe kwibhulogi olidalile.
Bona isigaba semvume ye-ukuze usebenzise okuqukethwe kwakho ngokuningi mayelana namalungelo akho kokuqukethwe kwakho, nokuthi okuqukethwe kwakho kusetshenziswa kanjani kumasevisi ethu
Bona isigaba ukususa okuqukethwe ukuze ufunde ukuthi kungani nokuthi singakususa kanjani okuqukethwe okwenziwe umsebenzisi kusuka kumasevisi ethu
Uma ucabanga ukuthi umuntu othile uphula umthetho wamalungelo akho okuvikela ubunikazi bokusungula, ungasithumelela isaziso sokuphula umthetho futhi sizokwenza isenzo esifanelekile. Isibonelo, simisa okwesikhashana noma sivala ama-akhawunti e-Google okuphinda kuphulwe umthetho we-copyright kuwo njengoba kuchazwe kusikhungo sethu sosizo se-copyright.
Amanye amasevisi abandakanya okuqukethwe okungokuka-Google — isibonelo, ukukhomba okunini kokubuka okubonayo ku-Google Maps. Ungasebenzisa okuqukethwe kwe-Google njengokuvunyelwa yile migomo kanye neminye imigomo engeziwe yesevisi, kodwa sigcina noma yimaphi amalungelo okuvikela ubunikazi bokusungula esinawo kokuqukethwe kwethu. Ungasusi, usithe, noma ushintshe noma yimuphi umkhiqizo, amalogo, noma izaziso zezomthetho. Uma ufuna ukusebenzisa umkhiqizo wethu noma amalogo, sicela ubone ikhasi Izimvume ze-Google Brand.
Okokugcina, amanye amasevisi ethu akunikeza ukufinyelela kokuqukethwe okungokwabanye abantu noma izinhlangano — isibonelo, incazelo yomnikazi wesitolo yebhizinisi lakhe, noma i-athikili yephephandaba eboniswe kuzindaba ze-Google. Akumele usebenzise lokhu okuqukethwe ngaphandle kwemvume yalowo muntu noma yenhlangano, noma uma kungenjalo ngokuvunyelwe umthetho. Imibono evezwe kokuqukethwe kwabanye abantu noma kwezinhlangano kungeyazo, futhi ayivezi ikakhulukazi imibono ye-Google.
Amanye amasevisi ethu afaka isofthiwe engalandwa. Sikunikeza imvume yokusebenzisa leyo softhiwe njengengxenye yamasevisi.
Leli layisense esikunika yona -:
le ngumhlaba jikelele, okusho ukuthi livumeleke noma kuphi emhlabeni
okungakhiphi, okusho ukuthi ungafaka ilayisense okuqukethwe kwabanye
okungenazindleko, okusho ukuthi azikho izinkokhelo zaleli layisense
okomuntu siqu, okusho ukuthi alinwebi kunoma ubani
onganikeki, okusho ukuthi awuvunyelwe ukunika ilayisense kunoma ubani
Amanye amasevisi ethu abandakanya isofthiwe enikezelwa ngaphansi kwemigomo yelayisense yomthombo ovulekile esiwenza atholakale kuwe. Kwezinye izikhathi kunokunikezwa kulayisense lomthombo ovulekile elibhala ngaphezulu ngokusobala izingxenye zaleyo migomo, ngakho-ke sicela uqinisekise ukufunda lawo malayisense.
Akumele ukopishe, ulungise, usabalalise, uthengise, noma uqashise noma iyiphi ingxenye yamasevisi ethu noma isofthiwe. Futhi, akumele ubuyisele emuva ngobunjiniyela noma uzame ukukhipha noma iyiphi ikhodi yethu yomthombo ngaphandle uma unemvume yethu ebhalwe phansi noma unomthetho osebenzayo okuvumela ukuthi wenze njalo.
Uma isevisi idinga noma ibandakanya isofthiwe elandekayo, leyo softhiwe kwezinye izikhathi ibuyekeza ngokuzenzakalelayo kudivayisi yakho uma inguqulo entsha noma isici sitholakala. Amanye amasevisi akuvumela ukuthi ulungise izilungiselelo zakho zokuzenzakalelayo.
Ngokomthetho, unelungelo (1) lokuthola ikhwalithi yesevisi ethile, kanye (2) nezindlela zokulungisa izinkinga uma izinto zingahambi kahle. Le migomo ayikhawuleli noma ayisusi noma yimaphi lawo malungelo. Isibonelo, uma ungumsebenzisi, lapho uqhubeka nokujabulela wonke amalungelo womthetho anikwe kubasebenzisi ezweni lakho.
Sinikezela ngamasevisi ethu sisebenzisa amakhono nokunakekela okubonakalayo. Uma singahlangabezani neleveli yekhwalithi echazwe kulesi siqinisekisio, uyavuma ukusitshela futhi sizosebenza nawe ukuzama ukuxazulula inkinga.
Isibophezelo esisenzayo kuphela mayelana namsevisi ethu (kufaka phakathi okuqukethwe kumasevisi, imisebenzi ethile yamasevisi ethu, noma ukwethembeka kwayo, ukutholakala, noma amandla okuhlangabezana nezidingo zakho) (1) kuchazwe esigabeni Isiqinisekiso, (2) kushiwo kokuthi imigomo engeziwe ephathelene nesevisi ethile, noma (3) ukunikezela ngaphansi kwemithetho esebenzayo. Asenzi izibopho ezinye mayelana namasevisi ethu.
Futhi ngaphandle uma kudingwa umthetho, asinikezi iziqiniseko ezicatshangelwe, ezifana neziqiniseko ezicatshangelwe zezinga elamukelekile lezimpahla ezingathengiseka, ukufaneleka kwenjongo ethile, nengaphuli umthetho.
Kubo bonke abasebenzisi
Le migomo ikhawulela izibopho zethu njengoba kuvunyelwe umthetho osebenzayo. Ngokucacile, le migomo ayikhawuleli isibopho se-Google ngokufa noma ukulimala komuntu siqu, ukukhwabanisa, ukuhlanekezela amaqiniso, ubudedengu bonke, noma ukungaziphathi kahle kwenhloso.
Ngaphandle kwalawa malungelo nezibopho ezichazwe kulesi sigaba (Uma kungaba khona izinkinga noma izingxabano), I-Google ngeke ibe nesibopho sanoma ikuphi okunye ukulahleka, ngaphandle kokuthi kubangelwe ukuphulwa kwethu kwale migomo noma imigomo engeziwe eqondiswe kusevisi.
Okwabasebenzisi bebhizinisi nabahleli kuphela
Uma ungumnikazi webhizinisi noma wenhlangano, ngobubanzi obuvunyelwe umthetho osebenzayo:
Uzobuyisela i-Google kanye nabaqondisi bayo, abasemagunyeni, abasebenzi, kanye nosonkontileka banoma ikuphi ukuqhutshekiswa kwezomthetho kwenkampani yangaphandle (okufaka izenzo zeziphathimandla zikahulumeni) okuvela noma okuhambisana nokusetshenziswa kwakho okungekho emthethweni kwamasevisi noma ngokuphulwa kwalawa masevisi noma imigomo engeziwe eqondiselwe isevisi. Lokhu kubuyisela kumboza noma yisiphi isikweletu noma indleko evela kusuka kuzimangalo, ukulahleka, ukulimala, ukwahlulela, izinhlawulo, izindleko zecala lokubanga enkantolo, nezinkokhelo zomthetho.
I-Google ngeke ibophezeleke kuzibopho ezilandelayo:
ukulahleka kwenzuzo, izimali ezingenayo, amathuba ebhizinisi, idumela, noma ukonga okucabangelwayo
ukulahlekelwa okungaqondene nokungagudluki
Isikweletu esiphelele se-Google esivela kokuphathelene nale migomo ikhawulelwe ukudlula (1) US$500 noma (2) 125% wezinkokhelo ozikhokhile ukusebenzisa amasevisi aphathelene ezinyangeni ezingu-12 ngaphambi kokwephula
Uma ukhishiwe kusuka kwezinye izibopho, kufaka phakathi isivikelo, bese lezo zibopho azisebenzi kuwe ngaphansi kwale migomo. Isibonelo, i-United Nations ijabulela okunye ukuvikela kusuka kuzibopho zomthetho futhi le migomo azibhali ngaphezulu lokhu kuvikela.
Ukuthatha isinyathelo ezimweni zezinkinga
Ngaphambi kokuthatha isinyathelo njengoba kuchazwe ngezansi, sizokunikezela ngesaziso esithuthukile uma kwenzeka, ukuchaza isizathu sesenzo sethu, nokukunika ithuba lokulungisa inkinga, ngaphandle kokuthi sikholwe ukuthi ukwenza kanjalo:
kubangela ukulimala noma isikweletu kumsebenzisi, inhlangano yangaphandle, noma i-Google
kwephula umthetho noma uhlelo lesiphathimandla somthetho
ukufaka engcupheni umsebenzi, ukuqinisa, noma ukuphepha kwamasevisi ethu
Isusa okuqukethwe kwakho
Uma ngokuphusile sikholelwa ukuthi noma ikuphi okuqukethwe kwakho (1) kuphula le migomo, imigomo engeziwe eqondiswe kusevisi noma izinqubomgomo, (2) ziphula umthetho osebenzayo, noma (3) zingalimaza abasebenzisi bethu, izinkampani zangaphandle, noma i-Google, sibese sigcina ilungelo lokumiksa phansi okunye noma konke lokho okuqukethwe ngokuhambisana nomthetho osebenzayo. Izibonelo zibandakanya izithombe zocansi zezingane, okuqukethwe okwenza ukwetshiwa kwezingane noma ukuhlukumeza, nokuqhukethwe okwephula amalungelo endawo yobuhlakani womuntu othile.
Ukumisa okwesikhashana noma ukunqamula ukufinyelela kwakho kumasevisi e-Google
I-Google igodla ilungelo lokumisa okwesikhashana noma lokunqamula ukufinyelela kwakho kumasevisi noma lokususa i-akhawunti yakho ye-Google uma enye yalezi zinto yenzeka:
wephule le migomo ngokweqile noma kaninginingi, imigomo engeziwe kwamasevisi ethile noma izinqubomgomo
kumele senze njalo ukuze sithobelane nesidingo sezomthetho noma umyalelo wenkantolo
ngokuphusile sikholelwa ukuthi ukuziphatha kwakho kubangela umonakalo noma isibopho sezomthetho kumsebenzisi, kunkampani yangaphandle, noma ku-Google — isibonelo, ngobugebenga ku-inthanethi, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, ukuhlukumeza, ukwenza ugaxekile, ukulahlekisa abanye, noma ukususa okuqukethwe okungesikho okwakho
Uma ukholwa ukuthi i-akhawunti ye-Google imiswe okwesikhashana noma inqanyulwe ngephutha, ungakwazi ukufaka isikhalazo.
Kunjalo, uhlala ukhululekile ukuthi uyeke ukusebenzisa amasevisi ethu noma kunini. Uma uyeka ukusebenzisa isevisi, singajabulela ukwazi ukuthi kungani ukuze siqhubeke sithuthukise amasevisi ethu.
Ukuqeda ukuphikisa, umthetho wokubusa, nezinkantolo
Ukuthola imininingwane mayelana nokuxhumana no-Google, ucelwa ukuthi uvakasheleikhasi lethu lokuxhumana.
Umthetho we-California uzobusa zonke izimangalo ezivelayo ngaphandle noma kule migomo, imigomo engeziwe yesevisi ethile, noma amasevisi aphathelene, ngaphandle kokugxubuzana kwemithetho. Lezi zimangalo zizoxazululwa ngokukhethekile ku-federal noma izinkantolo zezwe le-Santa Clara County, California, USA, futhi wena kanye ne-Google niyavumelana nendawo ethile kulezi zinkantolo.
Uma umthetho wasendaweni osebenzayo uvimbela lokhu kuphazanyiswa ekutheni kungaxazululwa enkantolo yase-California, ungathumela lokhu kuphikiswa kuzinkantolo zasendaweni yangakini. Ngokufanayo, uma umthetho wasendaweni osebenzayo uvimbela inkantolo yasendaweni yakho ekusebenziseni umthetho wase-California ukuze kuxazululwe lezi zingxabano nemithetho yendawo esebenzayo yezwe ohlala kulo, isifunda, noma indawo yokuhlala.
Ngomthetho, unamalungelo athile angakwazi ukukhawulelwa ngenkontileka njengale migomo yesevisi. Le migomo akuqondiwe ngayo sanhlobo ukuthi ikhawulele lawo malungelo.
Le migomo ichaza ubudlelwane obuphakathi kwakho ne-Google. Ayidali noma imaphi amalungelo ezomthetho abanye abantu nomaizinhlangano, nanoma abanye bazuza kusukela kubudlelwano bethu ngaphansi kwale migomo.
Sifuna ukwenza le migomo ibelula ukuthi iqondeke, ngakho-ke sisebenzise izibonelo kusuka kokuthi amasevisi ethu. Kodwa akuwona wonke amasevisi angatholakala ezweni lakho.
Uma le migomo ishayisana nemigomo engeziwe ecaciselwe isevisi, imigomo engeziwe izongamela leyo sevisi.
Uma kwenzeka ukuthi umbandela othile awusebenziseki, lokhu ngeke kube nomthelela kweminya imibandela.
Uma ungalandeli le migomo noma imigomo engeziwe ecaciselwe isevisi, futhi asenzi isenzo ngaleso sikhathi, lokho akusho ukuthi siyekelela noma imaphi amalungelo okungenzeka ukuthi sinawo, afana nokwenza isenzo ngokuzayo.
Singabuyekeza le migomo kanyenemigomo engeziwe yesevisi ethile (1) ukuze sibonise ushintsho kumasevisi ethu noma ukuthi senza kanjani ibhizinisi — isibonelo, uma singeza amasevisi amasha, izici, ubuchwepheshe, izintengo, noma izinzuzo (noma sisusa ezindala), (2) ngokwezomthetho, ukuqondiswa, noma izizathu zokuvikelwa, noma (3) ukuvimbela ukuhlukunyezwa noma ukonakaliswa.
Uma sishintsha ngokubalulekile le migomo noma imigomo engeziwe ecaciselwe isevisi, sizokunikeza ngesaziso esiphusile esithuthukisiwe kanye nethuba lokubuyekeza ushintsho, ngaphandle kwalapho (1) siqalisa khona isevisi entsha noma isici, noma (2) kuzimo eziphuthumayo, ezifana nokuvimbela ukuhlukunyezwa okuqhubekayo noma ukuphendula kuzidingo zezomthetho. Uma ungavumi imigomo emisha kufanele ususe okuqukethwe kwakho futhi uyeke nokusebenzisa lamasevisi. Ungaphinda uqede ubudlelwane bakho nathi noma kunini ngokuvala i-akhawunti yakho ye-Google.